भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुल्ने, सडकमा जोरविजोर प्रणाली ! - नेपालबहस
भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुल्ने, सडकमा जोरविजोर प्रणाली !
| १७:२३:४९ मा प्रकाशित
२४ भदौ, काठमाडौं । भोलि बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खुल्ने भएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपनि जनजीवन कष्टकर बनेपछि भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुलाउने निर्णय गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक यातायात, व्यापार, व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठक, गृह मन्त्रालयकै आदेशअनुसार निषेधाज्ञा खुलाउने निर्णय गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकार जनकराज दाहालले जानकारी दिए । भोलि बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात चल्नेछन् । तर जोर विजोर प्रणाली लागु गरिनेछ ।
सार्वजनिक यातायातसँगै निजी क्षेत्र, पसल, बजार, व्यवसाय, डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि खुल्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकार दाहालले बताए । यातायात, व्यापार, व्यवसायबाहेकका क्षेत्रमा भने भदौ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने छ ।
निषेधाज्ञा खुलेपनि कुन कुन क्षेत्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले केही बेरमा निर्णय नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि भदौ ३ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा आज राती सकिदैछ ।
वीरगञ्जमा असोज १५ गतेसम्म लम्बियो निषेधाज्ञा १ हप्ता पहिले
चितवनमा निषेधाज्ञा खुकुलोसँगै जोरबिजोर प्रणाली लागू १ हप्ता पहिले
स्रेस्तेदार र सिडिओका भान्सेसहित ५० जना संक्रमित १ हप्ता पहिले
लकडाउनले बन्द सौराहाका होटल बिहीबारदेखि खुल्ने १ हप्ता पहिले
डोटीमा निषेधाज्ञा खुकुलो २ हप्ता पहिले
रुपन्देहीमा एक हप्ता निषेधाज्ञा थप २ हप्ता पहिले
झापा कारागारका १० कैदीबन्दीमा कोरोना पुष्टि ४३ मिनेट पहिले
दिल्लीले चेन्नेईलाई दियो १७६ रनको लक्ष्य ५४ मिनेट पहिले
प्रधानसेनापति थापाबाट नेतृत्व सम्वाद कार्यक्रम शुभारम्भ ५६ मिनेट पहिले
गुल्मी अस्पतालका आकस्मिक सेवा वाहेक अन्य बन्द ६० मिनेट पहिले
पुनर्कर्जा कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायी निराश १ घण्टा पहिले
बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकको मृत्यु १४ घण्टा पहिले
धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल ४ घण्टा पहिले
महामारीमा जनतालाई भोक र रोगबाट बचाउन सरकारलाई निर्देशन ५ घण्टा पहिले